‘महरालाइ सुनियोजित फ’साइएको हो’ मधुको सन’सनीपूर्ण खुलासा – ताजा समाचार
‘महरालाइ सुनियोजित फ’साइएको हो’ मधुको सन’सनीपूर्ण खुलासा
[निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिबेला प्रहरी हि’रासतमा छन् । संसद सचिवालयमा कार्यरत रोशनी शाहीले आफूमाथि महराले यौ’न दु’व्र्यवहार गरेको आ’रोप लगाएपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका महरालाई दशैं समेत मान्न नदिएर सभामुख निवासबाटै प’क्राउ गरियो । आरोप लगाउने रोशनी शाहीले नै बारम्बार आफूमाथि कुनै दु’व्र्यवहार नभएको बताइरहँदा पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । हि’रासतमा रहेका पूर्वसभामुख महराको मुद्दालाई आजै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । यहीबीचमा युरोपमा व्यवसाय गर्ने मधु कार्कीले यो प्रकरणमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छन् । आफ्नो फेसबुक वालमा लामो स्टाटस लेख्दै सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।]
यूरोपमा सङघर्षरत मेरा पाइला । त्यति सहज त पक्कै छैन । पत्रकारिता अनि नेपाल हाउसलाई स्थापित गर्ने मेरो प्रतिवद्धता त्यो पनि विदेशी भूमिमा । पारिवारिक दायित्व पनि । एउटी नारीलाई त्यति सहज त पक्कै थिएन, छैन पनि ।
नेपाल हाउसमा संघर्षरत मेरो दैनिकी अत्यन्त व्यस्त थियो । व्यस्तताको बावजुद पनि राष्ट्रप्रेमले नेपालसङ्ग टाढा हुन नसक्नु मेरो मात्र नभई यो आम प्रवासी नेपालीहरुको दैनिकी हो । आजभन्दा लगभग ३ महिना अगाडि एउटा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट आयो । त्यो रिक्वेस्ट थियो, सावित्री सुवेदीको । धेरै दिन मैले रेसपोन्स गरिन किनकि उनको शुरुवातको अभियानमा मैले स्यालुट गरेकी थिएँ । तर, पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले मलाई तिनी पटक्कै मन नपर्ने अनुहार थिइन् ।
केही दिनपश्चात मैले उनीसङ्ग कुरा गरेँ । उनको पहिलो म्यासेज थियो, ‘महराको सचिवालयको एकजना महिला बीसौं बर्षदेखि सभामुखबाट भिक्टिम छिन् । तपाईं न्याय दिनुस् ।’ उनले सबै स्क्रिनशट पठाइन्, जो आज मिडियामा आइरहेका छन् । अनि मैले उनलाई उत्तर दिएँ, ‘बीसौैं बर्षदेखि कोही भिक्टिम हुन्छ र ? कृपया मलाई उमेर पुगिसकेका महिला आफै कुनै पुरुषसङ्ग होटल या अन्य ठाउँमा गएर म बलात्कृत भएँ भन्छिन् भने ती महिला चरित्रहीनका साथै देह सम्झौता गर्ने व्यापारी हुन् । साना बालबालिका र ग्रुप रेप भएको छ भने मात्र आवाज उठाउनुस् नत्र अन्य बलात्कारका आरोपहरु मात्र बार्गेनिङ हुन् । मैले उनलाई भने, ‘मलाई यो बिषयमा केही चासो छैन । प्रवासमा लगभग कहिलेकाहीँ १८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । फेरि मेरा आफ्नै उद्देश्यहरु छन् ।
पहिलो कुरो, मलाई सारै कौतुहल र आश्चर्य लाग्यो कि सावित्री सुवेदी मसङ्ग किन जोडिन चाहिन् ? कसले सल्लाह दियो ? अनि मैले उनलाई यही प्रश्न गरेँ । उनले भनिन्, ‘सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभयो । तपाईंलाई मधु कार्कीले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ्र ।’ मैले विश्वास गरेँ । किनकि म प्रवास जानुअघि सडक बालबालिका पुनस्र्थापनाको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्थें । आइजीपी सर्बेन्द्र खनाल काठमाडौं प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । खास ‘सडक बालबालिकासङ्ग बडादशैं’ कार्यक्रममा सहकार्य हुन्थ्यो ।
त्यसपश्चात उनलाई मैले उनका मन परेका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष भने । उनले गल्ती, कमिकमजोरी स्वीकार गर्दै सुधार्दै भएका गल्ती प्रष्ट्याउँदै आगामी दिनमा राम्रा काम गर्ने र त्यसमा मलाई तपाइँको साथ चाहिन्छ भनिन् । यदि कसैले दीप हुँ, म निभ्नुको कारण यो हो, म बल्न चाहन्छु, प्रकाश छ मसङ्ग भन्छ भने बाल्ने कोसिस सबै सामाजिक मनले गर्छ नै ।
अर्को कुरा, मेरो मात्र कौतुहल अनि दुखाई नभई आम नेपाली जनताको आजको दुखाई थियो, निर्मला हत्याकाण्ड । मैले उनलाई सोधें, तिम्रो शुरुको अभियान कपाल मुण्डन गर्यौ । तिमीलाई सबैले स्याबासी दिए । फेरि किन बाटो बदलेको ?
उनले उत्तर दिइन्, ‘मलाई आन्दोलन साम्य पार्न दवाव दिए ।’ पुनः मैले सोधें । उनले उत्तर दिइन् :
मलाई आश्चर्य लाग्यो । दोहोराई, तेहेर्याई सोधें । उनले एउटै कुरा भनिरहिन्, केपी ओली, केपी ओली । मैले उनलाई सोधें फेरि, हैन होला ! उनले भनिन्, ‘बिनु केपी ओलीको मीत छोरी हुन् । डाइनिङ टेबलमा केपी ओलीले मलाई राखेर भनेका हुन् । उनले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनका कुरा राखिन् । बाल्यकालका गुनासाहरु राखिन् । सोचें मैले, केही त सत्य पनि हुनसक्छ किनकि हाम्रो ग्रामीण समाजको चिन्तन कहिलेकाहीँ कतैकतै व्यवहारिक र न्यायोचित हुन्न पनि । मैले सोचें, सावित्रीलाई पोजेटिभ अनि निःस्वार्थ काउन्सिलङ र साथको खाँचो चाहिँ पक्का रैछ । मभित्रको भावना र कोमलताले उनलाई साथ दिने निर्णय गर्यो ।
तर मेरो प्रस्ताव थियो, तिमी क्लिन हुनुपर्छ पहिला । तिमी निर्मलाको केशले उदायौ र निर्मलाकै केशबाट अस्तायौ । अब तिमीले सत्य बोल । पब्लिकले पुनः माया गर्ने बन भने । उनीले भनिन्, ‘हुन्छ । तपाईंको साथ चाहिन्छ । म यथार्थ बोल्छु ।’ मैले साबित्रीलाई अब विश्वास गर्न लागेँ । सुखदुःख, मिसनका कुरा हुन्थे । यस्तैमा मेरो व्यक्तिगत काम थियो, पोखरामा । मैले शेयर गरेँ । उनले भनिन् ‘म जान्छु नि त ।’ मैले ‘हुन्छ’ भनेँ । म आफै आउने या मेरो वारेशनामा चाहिने भएकोले म आउने निर्णय गरेँ ।
भर्खर शुरुवात गरेको बिजनेस फेरि सेकेण्ड ब्रान्चको आवश्यकता भएर दोस्रो लगानी फाइनान्सियली म टाइट नै थिएँ । उनले भनिन् ‘फ्रेण्डशिपमा त्यस्तो हुन्छ र ? मसङ्ग छ । नेपालको लागि चिन्ता नगर्नुस् । तुरुन्त नेपाल आउनुपर्ने । विश्वास गरेँ । म आएँ । १० दिनको लागि सबै मिलाएर ।
पहिलो प्राथमिकता मेरो लागि निर्मला थियो । मैले प्रेसमिट गरौं यथार्थ भनें ।
उनले भनिन् ‘मलाई मार्छन् । ब्याक सपोर्ट चाहियो ।
मैले सोधेँ, ‘कस्तो ?’
‘म नेपालसङ्ग दिक्क भइसकेको छु ।’
मैले भने, ‘म सपोर्ट गर्छु तर तिमी क्लिन हुनु पर्छ ।’
‘बलियो सपोर्ट’, उनले भनिन्, ‘शशाङ्क कोइरालाले सहयोग गर्नुहुन्छ । गगन थापा ।’ उनले जे जे भनिन्, मैले कोसिस गरिरहेँ । अन्त्यमा उनले ‘रअ’को नाम लिइन् । अनि म झस्केँ ।
अब मैले इन्भेस्टिगेशन गर्न लागेँ । उनको व्यवहार र चिन्तनप्रति शङ्का लाग्न थाल्यो । यत्तिकैमा उनले पुनः सभामुख महराको कुरा निकालिन् । उनमा स्वार्थको भूत थियो । तर पनि मलाई बुझ्नु थियो । एकदिन दरबारमार्गको रेस्टुरेण्टमा फ्राइडे इभ्निङ जाऔं भनेँ । किनकि मलाई सत्यतथ्य बुझ्नु थियो । वाइन खाइयो । मैले उनलाई धेरै ख्वाएँ । उनमा एक किसिमको मायालुपन, आफ्नोपन त थियो । त्यसपश्चात पुनः मेरो आफ्नै किसिमको इन्भेस्टिगेशन शुरु भयो । उनले मलाई भनिन्, ‘रोशनीको कमजोरी भनेको रक्सी र … । रोशनीको धेरै कमजोरी छ । त्यसैले मैले भनेको जे पनि मान्छे ।’
म भित्रभित्र ग्लानीमा छटपटाइरहेको थिएँ । म किन आएँ यूरोपबाट ? कस्तो मान्छेलाई विश्वास गरेँ । यस्तै यस्तै … । तर, मन बाँधेर फ्रेण्डशिप गरिराखेँ । म त आई नै सकेँ नेपाल । अब मैले बुझ्नै छ । पुनः उनले भन्दै गइन्, रोशनी कोहीसङ्ग भेट्न र कुरा गर्न चाहन्न यो बिषयमा तर म बोलाउँछु । तपाईं रोशनीसङ्ग कुरा गर्नुस् । म रोशनीको मोबाइलबाट महरालाई म्यासेज गर्छु अनि डिलिट गर्छु ।’ मैले सोधेँ, ‘कहाँ सम्भव छ ?’ उनले भनिन् ‘सम्भव छ । मैले पहिले पनि सधैँ रोशनीलाई झ्याप भएको बेलामा गर्ने गरेको थिएँ । यत्ति भनेपछि अब मलाई सुन्न केही बाँकी रहेन । मलाई घृणा लागेर आयो । अब मैले गलत कुरा रोक्नु थियो । उनले ‘महराको लामो चिनजान घनिष्ट नै तर प्रेमिका चाहिँ हैन’ भनिन् ।
अब निर्मला हत्याकाण्डमा साबित्रीको दोहोरो भूमिका बुझ्नु थियो मलाई ।
मैले रिक्वेस्ट गरेँ उनलाई । उनले केपी ओलीलाई ‘बा’ भन्थिन् । ‘साबित्री म यूरोपमा बारबार निर्मलाको पिक्चर हेरेर रुन्छु । के तिमी मेरो आँसु पुच्छौ ? वास्तविकता भन ।’
उनीले भनिन्, ‘मैले सत्य बोल्दा सरकार ढल्छ । मलाई केपी ओलीले छोड्दैनन् ।’
केपी ओलीले ‘साबित्री, यो चर्केको आन्दोलनलाई तिमीले रोक्न भूमिका खेल्न सक्छौ । तिमीलाई के गर्नुपर्छ म छु । तिमीले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेपछि मैले ट्रयाक चेन्ज गरेकी हुँ । त्यसपश्चात केपी ओलीको मीत छोरी ‘बिनु’ भन्नेको घरमा बम दिदीबहिनीलाई २८ दिन राखेकी हुँ । नपत्याए बिनुको छिमेकीसङ्ग बुझ्नुस्’ भन्ने कुरा गरिन् । दिलीप बिष्टलाई सुधारगृहमा ल्याउने सल्लाह पनि बिनुले दिएको बताउँदै भनेकी थिइन्, ‘मैले दिलीप बिष्टलाई सुधारगृहमा राखेकी हुँ ।’
त्यसपश्चात मलाई एक्सनमा जानु थियो ।
पहिलो, सभामुखसङ्ग भेट्ने कुरा भयो । मैले उनलाई सम्झाएँ । आर्थिक लोभले बिलाप हुन्छ । तिमी यी सब नचाहिने कुरा मोबाइलबाट डिलिट गर । म तिम्रो साथी बन्न सक्छु । हामी आर्थिक क्रान्ति गर्नसक्ने भिजन भएका छोरी हौं । यो मोबाइल फ्याल्देऊ । तिम्रा विगत सबै फालिदेऊ । मसङ्गको सहकार्यको नयाँ पाना पल्टाऊ । उनले मानिन् । मोबाइल फालिन् । महराको अगाडि, मेरो अगाडि कमिकमजोरी स्वीकारिन् । उनको गुनासो थियो, सरकारले मलाई नराम्रोसङ्ग यूज गर्यो । मैले महरालाई प्रश्न गरेँ, ‘साबित्रीलाई यूज गरेको भन्छिन् । के हो ?’ उनीले भनिन् महरासँग ‘केपी ओलीले भनेर मैले २८ दिन बिनुको घरमा बम दिदीबहिनी ल्याएर राखेँ । सरकारलाई सहयोग गरेँ । आज म पीडित छु । पब्लिकले निर्मलाको कुरा उठाएर सार्वजनिक ठाउँमा हिड्न नसक्ने अवस्था भएको छ ।’
त्यसपश्चात् मैले भने, ‘अब म यो गम्भीर बिषयमा चुप हुँदैन । प्रेसमिट गर्छु । साबित्रीलाई महराको अगाडि सोधेँ, ‘तिमी सत्य बोल्छौ ?’ उनले महराको अगाडि उत्तर दिइन्, ‘सक्छु, । म तपाईंको साथ र अभियानमा सङ्गै हुन्छु ।’
मलाई उनको मप्रतिको आशा र विश्वासले उनीप्रति साथित्वको डोरी कसिलो बनाउन सहयोग गरिरहेको थियो । त्यसको दुईचार दिनपश्चात साबित्रीको भेटघाट पुनः बिनुसङ्ग बाक्लिदै गयो । उनी नजिकका साथीसङ्ग बाक्लिदै गयो । थाहा छैन, बिनु भन्ने को हुन् ? लास्ट नेम के हो ? त्यो पनि थाहा छैन मलाई । तर, साबित्री पुनः पहिलेकै मार्गमा हिड्न लागिन् । मलाई साबित्रीको चिन्तन, व्यवहार र त्यो अनुहार नै मन पर्न छोड्यो । मेरो सहयोग साथ पाए पुनः देशको लागि काम गर्छु भन्ने आवाज फेरियो ।
त्यसको ठ्याक्कै आठ÷दश दिनपश्चात रविजीको कार्यक्रममा निर्मलाको मुद्दा उठ्यो । उनको अनुहारमा चमक थियो किनकि अभिव्यक्ति एउटै लाइनको …। शालिकरामको हत्याले रविजीको प्रोग्रामले निरन्तरता पाउँदैन भन्ने कुरामा बिनुसङ्ग फोनमा कुरा गर्थिन् । मेरो उनीसङ्गको इन्भेस्टिगेशन जारी थियो ।
मलाई सबैप्रति नफरत र बितृष्णा भइरहेको थियो । जन्मेको भूमि अत्यन्त माया लाग्छ । तर अब म मेरो देशमा खुशी हुन सक्दिन । मेरो नेपाल आउने, केही गर्ने साहस र उमङ्ग सेलाउँदै गएको थियो ।
म विशेष कारणबस अझै नेपालमै छु । अकस्मात यस्ता समाचारले मलाई चकित बनाएको छ ।
म मेरै देशमा सुरक्षित नभएको महसुस गरिसकेको छु ।
तर विश्वास छ । यदि मलाई दुःख दिने र मेरो बच्चालाई आमाको मायाबाट बञ्चित गराउने दुस्साहस मात्र गरे भने सम्पूर्ण नेपाली जनता तथा विश्व समुदायले छोड्ने छैनन् ।
के सत्य हो ? त्यो भगवान शिव हुनुहुन्छ या सहभागी । महरा मेरो कोही हैनन् । न मेरो बाउ, काका, न मेरो आफन्ती न त मैले राजनीतिक चश्मा लगाएकी छु आजसम्म । मेरो लागि सबै राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञ समान हुन् । वास्तवमा नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञसङ्ग अत्यन्तै वितृष्णा छ मलाई । परदेशी हुँ । देशको माया बिछट्टै लाग्छ । केही सत्य र यथार्थसङ्ग जानकार हुँदाहुँदै मौन बस्नु अमानवीय ठानी फेरि पनि भन्न चाहन्छु– आमनेपाली र नेपाल सरकारलाई । क. महरालाई ग्राण्ड डिजाइनसहित फसाइएको हो ।
मधु कार्कीको स्टाटस जस्ताको तस्तै